Kirada gawaarida | Minibuses ee Madrid Tababarayaasha VIP | Basaska VIP Kirada gawaarida | Minibuses ee Madrid Tababarayaasha VIP | Basaska VIP
Kuraasta VIP ee 7 VIP
Minibuses iyo Minibuses
Minibuses kuraasta 16
Microbus Vip - Noocyada 16 Luxury
Minibuses 25 Jaraa'idyo
Minibuses 35 Jaraa'idyo
Basaska iyo basaska
Tababaraha iyo Tababaraha 70 Plazas
Iibsashada basaska, macalimiinta iyo ijaarashada basaska iyo basaska yar ee Madrid
Guryaha baska ee Madrid
Tiro balaadhan oo ah adeegyo in lagu sameeyo, sida safarada, aroosyada, BEDDELKA IYO BEDDELKA garoonka MADRID, adeegyada ganacsiga, gaadiidka fulinta
Wax kasta oo aad ubaahan tahay inaad ka safartid Garoonka Garoonka Madrid mid kasta oo ka mid ah aagga, ama ka adeegso Madrid si Garoonka Barajas
Madaarka Wareejinta - Madrid
Waxaan sameyneynaa dhammaan noocyada adeegga meel kasta oo ay ka socdaan meel kasta oo Madrid ah
Xajin, safar baaskiil, dalxiiso lagu ciyaaro jardiinooyinka dabiiciga ah, safaro magaalooyin lagu hagayo, jinsiyad, safar gaaban
Tababarayaal loogu talagalay Excursion ee Madrid
Waxkasta oo aad u baahato xirfaddaada, tartanka baaskiilada, dalxiisyada dugsiga, tartanada ... Waxaad ka heli kartaa shirkadeena, haddii aad qabto wax su'aalo ah nala soo wac oo waxaan kugula talineynaa safarkaaga
Waxaad u baahan tahay inaad marto dhamaan martidaada dhibic ama qodobo dhowr ah oo kaniisadda ka dibna u wareeji miiska.
Shirkadeena ayaa ku siin doonta kirada ugu wanaagsan ee aad u guurinayso arooskaaga, si aad u keento oo martida keento. Waxaad dooran kartaa qaabka aad dooneyso iyo haddii aad rabto inaad naga soo wacdo talada aan ku jirno
Shirkadda kirada macalimiinta iyo basaska yar ee Madrid
Torres Bus waa shirkad bas ah oo ku taala Madrid taasi waxay qaadataa wax ka badan sanado 50 ah si ay ugu dedejiso gaadiidka socdaalka wadada.
Goobta Torres Bus waxaan u qaadanaa badbaado iyo jawi aad u culus; sababta our gaari waa la cusbooneysiiyaa sida waafaqsan qawaaniinta; labadaba ammaanka iyo deegaanka; natiijadeena waa empresa Way sii kordhaysay iyada oo taageereysa dhammaan macaamiisheenna.
Dhinaca kale; Shirkadeena ayaa u heellan kirada tababarka iyo kireysiga minibus iyada oo darawal uu bixiyay adeegyo badan oo kala duwan.
Waqtigan xaadirkan shirkadeena waxaan leenahay gaari gaari ah; in badan oo ka mida macaamiisha ayaa codsanaya kala duwan adeegyada sida tusaale ahaan; waxay ka bixi karaan sahlan Madrid laga soo iibsaday garoonka o kirada arooska. Waxaa jira noocyo badan oo adeegyo ah oo aan samayno sanadka oo dhan.
Taasi waa sababta aan u go'aaminno bixinta xiriirka ugu fiican tayada / qiimaha wakhtigaas oo kireeya tababaraha Madrid.
Our filo ah: sedan, minivan, baska iyo baska
Kadib waxaad arki kartaa gawaarida kala duwan ee qayb ka ah noo gaari bas.
Haddii aad xiiseyneyso gaari gaar ah waxaad kaliya ku riixeysaa sawirka oo wuxuu kuu geyn doonaa boggaaga; taas oo aad ka heli doonto sawirro dheeraad ah oo gaarigaaga ah iyada oo dheeraadka ah.
Sedan Mercants Benz 4 Squares
Ma u baahan tahay gaadhi inaad ka guurto mid ka mid ah dhammaadka Madrid mid kale? Seddexdeena waxay leeyihiin kuraasta 4 ee gaadiidka rakaabka
Ma raadinaysaa gaadiid badbaado leh oo raqiis ah? Minibaankeena waxay leedahay aasaasiyadaha si ay u qaadaan koox yar oo dadka 7 ah
Ogow More ...
Van Luxury Mercedes Benz 7 Jaraa'id
Ma u baahan tahay a Garoonka diyaaradaha ee Madrid oo ay la socdaan madaxda shirkaddaada ama koox ka mid ah maamulayaasha? Gaadiidkayagu waxay la yimaadaan dhammaan waxyaabaha dheeraadka ah
Mid ka mid ah microbuses ugu fudud ee shirkadeena, wuxuu leeyahay shaqooyinka aasaasiga ah
Heerka Ganacsiga Minibus 16-22 Squares
Minibus Fasalka Ganacsiga, fudud oo la jaanqaadaya USB-ga si loogu isticmaalo qalab mobile
Baska yaryar ee 25
Baaxada gudaha, yar yar ee dibedda ah, sahlan gudaha gudaha, midabada dibedda, ma u baahan tahay microbus for a Filimada ama a dalxiis?
Minautocar 25 kuraasta VIP
Raaxada, Glamor, Style ... Waxaas oo dhan waxaad ka heli kartaa tan minibus
Minibus 30 kuraasta maamulka
Socdaal fog? Iyadoo tan Microbus la xalinayo, iyada oo mid ka mid ah asaasiga kuraasta 30 uu leeyahay USB iyo DVD-duub
Kuraasta VIP Microbus 30 VIP
Dhaqdhaqaaqa gudaha, raaxada, kuraasta cagaarka ah, mooska, afkiisa gaarka ah ...
Kuraasta Microbus 35
Ma u baahantahay in aad martid martida? ama si fudud u safri goobta parkka ee caruurta leh
¿Gaadiidka martida xaflad aroos ahCuntada shirkadda?
Gaadiidka VIP ee Mercedes Tourismo 52-56
Tani waa baska wuxuu leeyahay dhammaan fursadaha suurtogalka ah ee loogu talagalay, raaxada iyo ku raaxaysiga safarrada, boorsooyinka waaweyn iyo wixii ka sareeya meel kasta oo raaxo ah
Baska 70 Bus
Dabbaaldegyada, Xisbiyada dhalashada, Aroosyada, Goobaha la socda. Dadka 59 miyay yihiin? Ha welwelin, tan baska Waxay leedahay awooda rakaabka 70
Adeegyada noocee ah ayaan ka qaban karaa a Guryaha basaska ee Madrid?
Faallooyinka koowaad; taas oo hadda ah adeegyada loogu talagalay kiro noocan ahbasaska o Minibuses Waxay ku xiran tahay hadba sida aad u weydiiso ama macmiilku waydiiso.
Tusaale ahaan; waxay noqon kartaa kiiska adeegyada tareeyo gaadiidka martida ee a boda; Dhamaan arrimahan ka dib socdaal gaaban waa.
Iyada oo ku xidhan nooca macmiilka, hal nooc ama mid kale oo adeeg ah ayaa qandaraas la galay.
Dad badan iyo dad badan ayaa ku biiraya Guryaha basaska ee Madrid; midkoodna qaado garoonka ama a dalxiis
Waqtigan xaadirka ah adeegyada badan ee qandaraasku waa kuwa soo socda:
Ka wareejinta Garoonka Barajas ilaa bartamaha Madrid
Waa maxay a Garoonka diyaaradaha ee Madrid bartamaha? Sida iska cad adeegga wareejinta ama adeegga wareejinta waa inuu qaato rakaabka ama rakaabka, madaarka Garoonka Barajas, ilaa bartamaha Madrid (huteel ama hudheel tareen AVE) ama meel kale oo u dhow; Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Parla, Pinto, Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Alcala de Henares, Torrelodones.
Waa maxay adeegga safarka wareega ah? Ugu horreyntii, marka hore, waa in aan tixgelinno in adeegga safarka ee wareegga ah uu yahay inuu martigeliyo martidaada, lamaanayaasha, qoyska ama asxaabta, Madrid, sida Sarre Hotel ama saldhig tareen atocha (Madrid), ka dibna u qaado meel kale oo ku meel gaadh ah sida Toledo, ka bixida 09: saacadaha 00 (ama waqtiga la isku raacay) oo dib u soo qaada, waqtiga kuxiga heshiiska.
Maxay heshiis ugu jirtaa Torres Bus?
Waxaan nahay shirkad leh xirfadlayaal aqoon u leh oo loo qoondeeyay shaqada iyo xirfadda ee gaadiidka kala duwan ee rakaabka iyo rakaabka wadada.
In our qalabka Hadda waxaan haysannaa darawaliin xirfad leh, oo lagu tababaray koorsooyin degdeg ah iyo filim casri ah oo casri ah.
Torres Bus waxaan jecel nahay inaan ku dhageyno oo aan ogaano waxa aad u maleyneyso, waana sababta ay u badan yihiin macaamiisha naga caawiya horumarinta xirfadeena xirfadeed; ka qaybqaata hadhuudhka ciidda.
Hadda waxaan heysanaa wax ka badan macaamiisha 680.478. Sababtaas awgeed maanta waxaan nahay Shirkadda basaska ee madrid waxa aan nahay
XAFIISKA MACLUUMAADKA BUKAANKA
Immisa ayey ku kacaysaa ...?
Ma ogtahay inaad heli karto macluumaad badan oo kaliya marka la akhriyo maqaal? riix halkan, waadna ogaan doontaa intee ayey ku kacayaan? adeegyada, baabuurta iyo waxyaabo kale oo aan usbuuc kasta soo gudbineyno
Ma ogtahay ...?
In Torres Bus, waxaan go'aansannay inaan kuu sheegno dad badan oo xiiso leh, sida calaamadaha ka jira Madrid, oo aad ku soo booqan karto caasimadda
Shirkadda kirada macalimiinta iyo basaska yar ee Madrid Maarso 22nd, 2019Kireysiga tababarayaasha
Gaadiidka baska ee madrid
dariiqyada wadooyinka, 79
Xidhiidhada laga yaabo inaad xiiseyneyso
Guryaha Basaska ee Madrid
U soo wareejinta Garoonka Madrid
Iibsashada basaska ee aroosyada
Kirada kuraasta microbus 16
Qiimaha ijaarka baska
© 2019 Torres Bus SL Waxaa suuro galiyay WordPress Mawduuca: Brooklyn by Mawduuca United